चलचित्र छाडेर अस्ट्रेलिया उड्दै अश्लेषा ? - गसिप - साप्ताहिक
चलचित्र छाडेर अस्ट्रेलिया उड्दै अश्लेषा ?
चलचित्र प्रेम गीत २ बाट राम्रो चर्चा कमाएकी अभिनेत्री अश्लेषा ठकुरीले त्यसपछि उहि ब्यानरको अर्को चलचित्र मेरी मामुमा पनि काम गरिन् । यो चलचित्रपछि अर्को चलचित्रमा फरक किसिमले काम गर्ने सोच अनुसार उनले निरन्तर जिम धाइन् ।
विभिन्न किसिमका तस्विर र भिडियो फेसवुक तथा इन्स्टामा पोस्ट गरिरहिन् । तर, पछिल्लो समय भने अश्लेषा सामाजिक सन्जालदेखि टाढा बनेकी छिन् । कतिसम्म भने उनी नियमित फोन सम्पर्क हुने साथिभाईहरुसँग समेत सम्पर्कमा नरहेको बजारमा हल्ला छ ।
अधिकांश समय उनको फोन स्विच अफ छ । आखिर अश्लेषा कता हराइन् ? कहाँ के गर्दैछिन् ? धेरैलाई थाहा नभएपनि उनी निकट व्यक्तीले दिएको अपुरो जानकारी अनुसार अश्लेषाले सोचेजस्तो चलचित्रको स्क्रिप्ट पाइनन् ।
चलचित्र बजारमा भविष्य नदेखेपछि अहिले उनी गुमनाम किसिमले अस्टे«लिया छिर्ने तयारीमा रहेको बताइन्छ । अस्टे«लियामा उनका केहि आफन्त समेत रहेकाले उनी उतै बस्न खोजेको समेत चर्चा छ । अस्टे«यामा बसेर आफ्नो बाँकी अध्ययन पुरा गर्ने, उतै जागीर खाने योजनामा रहेकी अश्लेषाले चलचित्र क्षेत्र छोडेकै हुन् त ? त्यो भने भविष्यमा पक्कै थाहा हुनेछ ।